Faq | July 2022
Tena > Faq
mampifanaraka ny fanjakana empira
Fifanarahana amin'ny fanjakana Empire - vahaolana vaovao
Ahoana no hanamboarako ny MSVCP100 DLL tsy hita? Ahoana no manamboatra Msvcp100. sns ErrorsDownload ny Microsoft Visual C ++ 2010 Service Pack 1 Redistributable Package MFC Security Update ary alefaso izany. Mametraha fanavaozana misy Windows. Avereno ny msvcp100. Mandehana scan virus / malware amin'ny rafitrao iray manontolo. Mampiasà System Restore raha hanafoana ireo fanovana natao tato ho ato.
lalao japoney mihazakazaka
Lalao japoney mihazakazaka - mety vahaolana
Ahoana no hamonoako ny fanoratana ao amin'ny WordPad? Tsindrio ny bokotra 'Ins ' raha hanodina ny fomba fanoratana overtype. Miankina amin'ny maodelin'ny fitendry anao, ity lakile ity dia mety azo asiana marika koa hoe 'Ampidiro. ' Raha te hanafoana ny maody overtype fotsiny ianao, nefa mitazona ny fahaizany mamerina azy io dia vita ianao.
hitsin-dàlana amin'ny mozika
Hitsin-kiran'ny mozika alika - vahaolana azo ampiasaina
Afaka mampiasa MP4 amin'ny Movie Maker ve ianao? Tsia! Ny MP4 Movie dia tsy tohanan'ny Windows Movie Maker. Ka mila mamadika MP4 ho WMV ianao, endrika mifanentana amin'ny Windows Movie Maker alohan'ny hanafarana.
crio miaraka amin'ny malware
Criteo com malware - mitadiava vahaolana
Aiza no ametrahana ny maody Visio? My folder Shapes
inona ny hwidako
Whats my hwid - vahaolana mety
Aiza no apetraka Msxml DLL? Amin'ny tranga marobe, ny vahaolana dia ny fametahana tsara ny msxml. dll amin'ny PC-nao, mankany amin'ny folder Windows system. Raha tsy izany, programa sasany, indrindra ny lalao PC, dia mitaky ny fametrahana ny fisie DLL ao anaty fampirimana fametrahana lalao / fampiharana.
terena hamafana windows.old
Force famafana windows.old - vahaolana amin'ny
Inona no atao hoe client EXE? Client.exe dia rakitra azo ampiharina izay ao anatin'ny Altiris Carbon Copy Solution, programa iray ahafahan'ny mpampiasa miditra sy mifehy solosaina maro miaraka. Ny extension .exe amin'ny filename dia manondro fisie azo ampiharina. Ny rakitra azo ampiharina dia mety hanimba ny solosainanao amin'ny tranga sasany.
ihb23 olana Bluetooth
Olana Bluetooth Ihb23 - fanontaniana sy valiny voatanisa
Inona no atao hoe SLUI EXE? Ny fizotran'ny slui.exe (fantatra koa amin'ny hoe Windows Activation Client) dia fizotran'ny rafitra Windows manan-danja izay mandray anjara amin'ny fampandehanana ireo fahazoan-dàlana Windows 10. Ny PC Windows 10 tsirairay avy dia mitaky fahazoan-dàlana manome ny fidiran'ny mpampiasa amin'ny fisehon'ny Window rehetra.
nanova loko ny bara fizahana
Niova loko ny bara-boatendry - referansy feno
Mpanonta horonantsary tsara ve ny Movie Maker? Avidemux dia iray amin'ireo rindrambaiko fanovana horonantsary tsara indrindra ho an'ny vao manomboka satria tsotra be ny fitetezana azy. Tombontsoa: Rindrambaiko tena tsotra; tsy mila mamaky doka teknika. Maharatsy endrika: tsy dia be loatra amin'ny endri-dahatsary hafa. Ny tsara indrindra ho an'ny: Asa fanovana fototra ho an'ny vao manomboka.
esory manokana onedrive
Esory ny onedrive manokana - valiny mahazatra
Ahoana no hanesorako ny OneDrive amin'ny Mac? Mandehana any amin'ny folder Applications via Finder. Mitadiava rindrambaiko OneDrive ary kitiho ankavanana ary avy eo safidio ny Move to Trash. Azonao atao koa ny misintona ny kisary OneDrive avy amin'ny birao mankany amin'ny fako ary mampiditra ny mari-pahaizana Mac rehefa anontaniana ianao. Tsindrio Ok.
mpow mpow 059
Mpow 059 mpow - ny fomba hiatrehana
Azoko atao ve ny manadio sy ny pejin'ny pejy? Mitadiava safidy 'Shutdown: Clear virtual memory pagefile' ao amin'ny pane ankavanana ary tsindrio indroa. Tsindrio ny safidy 'Eniled' ao amin'ny fikandrana fananana izay miseho ary tsindrio 'OK'. Windows dia hamafa ny fisie pejy isaky ny manakatona ianao.